Shiinaha 10 galoofyada guud ee difaaca ee faahfaahinta iyo soosaarayaasha waxqabadka ilaaliya iyo alaab-qeybiyeyaasha | Joysun
10 galoofyada guud ee difaaca ee faahfaahinta iyo waxqabadkooda ilaalin ah
Gacantu waa qayb aad u muhiim ah oo jirkeena ka mid ah, shaqada iyo noloshuna waa kuwo aan laga sooci karin. Laga soo bilaabo wakhtigii aanu dhalanay, ilaa dhamaadka nolosha, gacmuhu way isdaba socdeen. Waa wax laga xumaado inaan inta badan iska indhatirno muhiimadiisa iyo ilaalinta gacmaheena, sidaa darteedna warshadaha casriga ah, shilalka dhaawacyada gacantu aad ayey u kordheen, dhaawacyada gacantana waxaa lagu xisaabiyaa dhaawacyada gacanta ee noocyada kala duwan ee shilalka shaqada la xiriira 20%. Tani waa xog aad u naxdin badan, sidaa darteed xulashada saxda ah iyo isticmaalka galoofyada difaaca waa mid aad muhiim u ah.
Dhaawacyada gacanta ee caadiga ah waxaa asal ahaan loo kala saari karaa saddex qaybood, oo kala ah dhaawacyo jireed, dhaawacyo kiimikaad iyo dhaawacyo bayooloji ah.
Injury Dhaawaca jirka waxaa keena dabka, heerkulka sare, heerkulka hooseeya, elektromagnetic, shucaaca ionizing, shoogga korantada iyo sababaha farsamada. Waxay saameyn weyn ku leedahay lafaha, muruqyada, unugyada iyo hay'adaha, jabka faraha oo daran, jabka lafaha iyo faraha cad, iwm.
Damage Waxyeellada kiimikada ayaa ah dhaawaca maqaarka gacmaha ee ay sababaan walxaha kiimikada, inta badan waxaa sababa soo-gaadhista muddada-dheer ee asiidhyada iyo alkalis, sida saabuunta dawada lagu nadiifiyo, jeermiska-dilaha, iwm.
Injury Dhaawaca noolaha waa fududahay in la fahmo, asal ahaan waa infakshan maxalli ah oo ka dhasha qaniinyada noolaha.
Sida looga fogaado dhaawacyadan gacanta waa in si sax ah oo macquul ah shaqada loogu adeegsado galoofyada difaaca. Hadda si faahfaahsan u sharrax 10 galoofyada guud ee difaaca ee kaa caawinaya inaad doorato galoofyada saxda ah
Nooca koowaad: galoofisyada dahaadhka
Gacmo gashi dahaaran ayaa loo isticmaalaa shaqo toos ah. On AC danab ee 10 kV ama u dhiganta qalabka korontada DC, xirashada galoofyada dahaadhsan waxay qaban karaan shaqada dahaarka korantada. Sida galoofad dahaadh ah, waa inay leedahay astaamo dahaadh wanaagsan, iyo xoog hoos u dhac, dheereynta nasashada, caabbinta daloolka, caabbinta gabowga, iska caabbinta heerkulka hooseeya iyo caabbinta ololka dhammaantood waa kuwo aad u wanaagsan. Muuqaalka iyo teknolojiyadda galoofyada waa inay buuxiyaan shuruudaha "Xaaladaha Guud ee Farsamada ee Gacmo gashi dahaaran ee Shaqeynta Live", iyo soosaarka adag ayaa lagu gaari karaa awooda ilaalinta ee loo baahan yahay si looga fogaado dhimashada sababo laxariira koronto saa'id ah.
Nooca labaad: galoofisyada u adkaysan kara gacmo gashi
Iska yaree galoofisyada adkaysiga badan ee loo isticmaalo warshadaha sida wax soo saarka birta, warshadaha mashiinada, warshadaha baaskiilka, warshadaha muraayadaha iyo warshadaha saxanka birta si looga hortago walxaha fiiqan ee mindi ama gacmaha la gooyo. Waxaa badanaa loo isticmaalaa fiberka iyo waxsoosaarka kale ee dharka adag ee fiber-ka, hadda ugu isticmaalka badan waa shirkadda Mareykanka ee loo yaqaan 'DuPont Kevlar material'. Waxyaabaha Kevlar waa nooc ka mid ah fiber-ka aramid. Gacmo gashiyada goynta u adkaysta ee laga sameeyay ayaa ka jilicsan alaabta maqaarka, waxayna leeyihiin caabbinta kuleylka oo wanaagsan, iska caabinta dabka, iska caabbinta jajaban iyo iska caabbinta gashaanta. Waxyaabaha Kevlar sidoo kale waa shey guud oo loogu talagalay hubka jirka, waxqabadka ilaalintiisuna waa mid la isku halleyn karo.
Nooca seddexaad: galoofyada difaaca ololka ee heerkulka sareeya
Gacan-gashiyada ololka celiya ee heerkulka sarreeya waa galoofyada difaaca ee loo isticmaalo deegaanka heerkulka sare, kuwaas oo badanaa loo isticmaalo dhalaalinta ka hor shaqaalaha foornada ama noocyada kale ee foornada. Waxay leedahay saddex nooc, midna waa shiraac olol celin kara oo ah dharka gacmo gashi, dhexda waxaa lagu dhejiyaa polyurethane sida lakabka dahaarka kuleylka; midka kale waxaa laga sameeyaa maadada asbestos sida lakabka kuleylka kuleylka, banaanka waxaa laga sameeyaa dhar olol celinaya sida dharka; ugu dambayntii Mid ayaa ah in lagu buufiyo bir dusha sare ee galoofyada maqaarka, taas oo u adkeysan karta heerkulka sare iyo holaca ololka oo waliba ka tarjumi kara kuleylka iftiimaya. Gacan-gashiyaasha ololka celiya ee heerkulka sarreeya ayaa lagu heli karaa saddex cabbir, waaweyn, dhexdhexaad iyo yar, kuwaas oo u qaybsan nooc laba farood ah iyo nooc far shan ah.
Tan afraad: galoofyada ka-hortagga-jirka
Gacmo gashiyada ka-hor-tagga ah guud ahaan waxay ka kooban yihiin maaddooyin la tolay oo ay ku jiraan fiilooyin isxigxiga, waxaana sidoo kale laga samayn karaa timo dhejis acrylic ah oo dhererkiisu badan yahay. Nooca labaad ee galoofku wuxuu u baahan yahay in lagu xidho cusbada polyurethane ee qaybta baabacada, ama cusbada polyurethane ee qaybta farta ama ku dahaadh polyetylen korka gacmo gashi. Gacan-gashiyada ka samaysan fiilooyinka isdaba-joogga ah ayaa si dhakhso leh u kala diri kara korantada ma guurtada ah ee gacmaha ku urursan. Nooca labaad ee galoofyada leh polyurethane ama polyetylen daahan badanaa ma fududa in la soo saaro boodh iyo koronto joogto ah. Gacan-gashiyada ka-hortagga ah waxaa badanaa loo isticmaalaa kormeerka wax soo saarka, daabacaadda, alaabada elektarooniga ah, daciifka hadda, isku-xirnaanta qalabka saxda ah iyo shaqada kormeerka ee hay'adaha cilmi-baarista ee kala duwan.
Fifth: Welder galoofyada
Gacmo gashi Welder waa aalad difaac ah si looga hortago heerkulka sare, biraha la shubay ama dhimbiilladu inay ku gubtaan gacanta inta lagu jiro alxanka. Shuruudaha muuqaalka ee galoofyada alxanka waa kuwo adag, oo faraqa u dhexeeya alaabada heerka koowaad iyo heerka labaad. Badeecada heerka koowaad waxay ubaahantahay jirka maqaarku inuu ahaado mid isku mid ah dhumuc, buurbuur, jilicsan iyo laastik. Dusha sare ee maqaarku waa hagaagsan yahay, midaysan yahay, adag yahay, midabkiisuna is waafaqsan yahay, oo aan lahayn dareen dufan leh; jirka maqaarku waxaa ka maqan dabacsanaan buuxda, dusha maqaarku waa mid qaro weyn, midabkiisuna waxyar ayuu mugdi yahay. Fasalka labaad. Gacmo gashi Welder badanaa waxaa laga sameeyaa lo'da, tamarin doofaar ama maqaar laba lakab ah, waxaana loo qaybiyaa nooc laba-farood ah, nooc saddex-farood ah iyo nooca shan-farood iyadoo loo eegayo farqiga nooca farta. Gacmo gashi Welder mararka qaarkood waxaa loo isticmaali karaa galoofisyada heerkulka sare galoofisyada u adkaysta.
Nooca lixaad: galoofyada anti-gariirka
Gacan-gashiyada ka-hortagga gariirka waxaa loo isticmaalaa in looga hortago cudurrada shaqada ee ku dhaca gariirka ee sababa gariirka. Kaymaha, dhismaha, macdanta, gaadiidka iyo qeybaha kale ee qalabka gariirka gacanta lagu haysto sida miinshaarta silsiladaha, makiinadaha qodista iyo u nuglaanta gariirka cudurada shaqaalaha - - "cudurka farta cad." Gacan-gashiyadan waxay ku darayaan dhumuc cayiman xumbada, cinjirka iyo hawo-qaadka hawada dusha timirta si ay u soo nuugaan gariirka. Markay ka sii dhumuc weyn tahay calaacalaha iyo faroodku, ayaa mugga hawadu sii weynaanayaa, isla markaana ka sii fiicnaanaya saamaynta qoyaanka, laakiin way fududahay in hawlgalka waxyeello la gaadho.
Toddobaad: galoofisyada adkaysi u leh acid iyo alkali
Gacan-gashiyada Acid iyo alkali waxay u kala qaybsami karaan asiidh caag ah iyo galoofisyo iska caabiya alkali, aashito caag ah iyo galoofisyo adkaysi u leh alkali, acid latex iyo galoofisyo adkaysi u leh alkali, aashito caag ah iyo galoofisyada adkaysi u leh alkali, iwm. Waa shey ilaalin ah si looga hortago aashitada iyo walxaha alkali inay dhaawacaan gacmaha. Cilladaha ay ka mid yihiin buufinta dhaxanta, jilicsanaanta, ku dheganaanta iyo dhaawaca lama oggola. Tayada ayaa u baahan inay si adag ula dhaqanto qodobada "Acid (Alkali) galoofyada". Gacan-gashi kale oo aashito iyo alkali u adkaysta waa inay ahaadaan kuwo hawo leh. Cadaadis gaar ah awgeed, looma ogolaanayo daadinta hawadu. Gacmo-gashiyada aan biyuhu lahayn iyo galoofyada fayraska ka hortagga ah waxaa lagu beddeli karaa galoofisyo acid iyo alkali adkaysi u leh, oo waliba leh saameyn wanaagsan.
Sideedaad: galoofyada saliida u adkaysata
Galoofyada saliida u adkaysta waxaa loo isticmaalaa in maqaarka galoofyada looga ilaaliyo cudurada kala duwan ee maqaarka ku dhaca ee ay keenaan walxaha saliida leh. Gacmo gashiyadan ayaa inta badan ka samaysan caag nitrile ah, chloroprene ama polyurethane. Dadka qaar ee u nugul kicinta saliidaha iyo dufanka waa inay isticmaalaan galoofyada saliida u adkaysta si looga fogaado maqaarka daran ee maqaarka, finanka, maqaarka qallalan, maqaarka qalalan, midabka midabka, iyo cidiyaha isbadalada.
Sagaalaad: galoofis nadiif ah
Gacmo gashiyada aan boodhka lahayn ayaa ka hortagi kara korantada ma guurtada ah ee bini'aadamka in ay waxyeello u geysato badeecada inta lagu gudajiro wax soo saarka, waxaana laga sameeyaa caag dabiici ah. Waxay ka ilaalin kartaa badeecada faddaraynta iyo saameynta haraaga farta, boodhka, dhididka iyo wasakhda saliida inta lagu jiro howsha wax soo saarka, waxayna si wax ku ool ah u ilaalin kartaa sheyga. Gacmo gashiyada ugu caansan ee aan lahayn boodhka ee qolalka nadiifka ah waa galoofisyada polyvinyl chloride (PVC).
Nooca tobnaad: galoofyada anti-X -ray
Gacmo gashiyada anti-X -ray waa galoofyo shaqsiyan ay xiraan shaqaalaha X -ray, waxayna ka samaysan yihiin caag jilicsan oo leedh ah oo dhuuqaya ama daweyn kara X -rays isla markaana leh sifooyin jireed oo wanaagsan. Shaqaalaha ku hawlan X -rays way u baahan yihiin maxaa yeelay waxay badanaa helaan shucaaca 'X -ray' waana kuwo dhib badan u leh aadanaha. Raajada 'X -rays' waxay dhaawici kartaa qaab dhismeedka unugyada waxayna sababi kartaa dhaawac nolosha oo dhan ah oo ku saabsan hiddo-wadayaasha hidde-wadaha ah oo ay adag tahay in la dayactiro, waana sahlan tahay in la keeno kansar. Waxay saameyn wax ku ool ah ku leedahay leukocytes-ka dhiigga aadanaha, taasoo keentay hoos u dhac ku yimaada tirada, taasoo keenta hoos u dhac ku yimaadda xasaanadda jirka, waana sahlan tahay in la bukoodo.
Waqtiga dhejinta: Jul-06-2020